FARADOFAY: Atrikasa niarahan’ny Antenimierandoholona sy ny Société Civil tany Tolagnaro – Sénat de Madagascar
Natokan’ny avy ao amin’ny Antenierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES na ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung nanatontosana atrikasa lehibe mahakasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny tsy fananan’asa hoan’ny tanora tany amin’ny Faritra Anosy ny 25 , 26 aprily 2019 lasa teo.
Ny andro voalohany dia miompana tamin’ny atrikasa niarahany tamin’ireo mpisehatra eo anivon’ny société civile tany Tolagnaro, nahitana ihany koa ireo Loholona voafidy avy any amin’ny Faritra Androy sy Anôsy iny. Nampahafantarana ny vahoaka ihany koa ny andraikitr’ity Andrimpanjakana faharoa ity ankoatry ny maha mpanao lalàna azy dia misolo tena ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjarampahefana.
Nisy ihany koa ny fihaoanana mahakasika ny fianam-bahoaka sy ny fisitrahany ny vokatran’ny tamberina andraikitra avy amin’ny Orin’asa lehebe tany an-toerana toy ny QMM sy ny fitantanana izany; inona tokoa moa no olana na sakana tsy hisitrahan’ny mponina any an-toerana izany hoy ny talen’ny fanampariahana Andriamatoa RANDRIANAMBININA Christian Robert eo anivon’ny Antenierandoholona no maha tonga ny olona betsaka mbola mitaraina?
Nanentana ny vahoakan’ny Tolagnara na Faradofay sy ny manodidina ihany koa ireo delegasiona tonga tany an-toerana nahitana ny avy amin’ny Antenimierandoholona notarihin’ny Filohany Rivo RAKOTOVAO sy ny mpiara-miombonantoka FES izay notarihin’Andriamatoa RAMIANDRARIVO John.